Home प्रदेश किशोर किशोरीका लागि गहकिलो खुराक ‘सेकुवा’
काठमाडौं । किशोरावस्था पुगेकाहरुले नेपालमा अझै चाहे जस्तो साहित्यि पाठ्या सामग्री पाउदैनन् । बाल बालिका केन्द्रित धेरै सामग्री प्रकाशन भएपनि किशोर किशोरीका चाहना अनुरुपमा साहित्यिक कृति छैनन् ।
उमेर अवस्था र स्वभावले किशोर किशोरहरु जोशिला हुन्छन् अनि नयाँ कुराको असाध्यै भोका हुन्छन् । केही सिक्ने चाहना पनि हुन्छ । यहि उमेर समुहका पाठकका चाहनालाई ध्यानमा राखेर लेखक कृष्णदिप सिग्देलले उपन्यास लेखेका छन् ‘सेकुवा’
तशर्थ ‘सेकुवा’ किशोरकिशोरीका लागि एउटा कोसेली हो । किशोरकिशोरीका लक्षित किताब कै खडेरी भएको अवस्थामा यो एउटा पुस्तक पूर्ण समाधान नहुन सक्छ तर अभाव पुर्तिका लागि एउटा प्रयास भने पक्कै हो
किशोरकिशोरीलाई रोमाञ्च मन पर्छ । विपरित लिङ्गप्रतिको आकर्षण हुन्छ । शारिरीक परिवर्तन वा यौनका बारेमा बुझ्न चाहन्छन् । सामाजिक वा देशभक्तिको भावना पनि बढी नै हुन्छ । सबैलाई आफ्ना कुरा खुलेर भन्दैनन् तर कुरीति वा विसङ्गतिबिरुद्ध निर्धक्क बोल्न वा कार्यशिल हुन मन गर्छन् । उनीहरु चाहन्छन् उनीहरुका यिनै रुचिका क्षेत्रलाई सम्बोधित गरिएका किताबहरु होऊन् । तर नेपाली भाषामा उनीहरुका लागि लेखिएका पुस्तक नै कहाँ छन् ! बजार वा पुस्तकालयमा धुइँपत्ताल खोजि गरियो भने सायद एउटा सानो झोलामा अट्नेसम्मका पुस्तक पाइएला कि ! त्यो पनि गाह्रो छ ।
लेखक : कृष्णदिप सिग्देल
तशर्थ ‘सेकुवा’ किशोरकिशोरीका लागि एउटा कोसेली हो । किशोरकिशोरीका लक्षित किताब कै खडेरी भएको अवस्थामा यो एउटा पुस्तक पूर्ण समाधान नहुन सक्छ तर अभाव पुर्तिका लागि एउटा प्रयास भने पक्कै हो । यस किताबले उनीहरुको रोजाइमा रहेका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दैन । एउटा किताबले सबै विषयलाई समेट्नु पनि हुँदैन ।
‘सेकुवा’मा गजबको स्वैरकल्पना छ । कथावाचन वा प्रस्तुतिको शैलि नितान्त भिन्न छ । कथाका विभिन्न भागमा जीवनसँग सम्बद्ध साना साना दर्शनका कुरा छन् कथाकै अंशका रुपमा । कथा छोटो छ तर भागैपिच्छे कौतुहलता उब्जाउने घटनावली छन् । पात्रका व्यवहार शुद्ध र प्राकृतिक छन् । कथामा मोडहरु धेरै नै छन् तर मूल विषयबाट कथा भट्किएको छैन । कथा सन्तुलित छ, भाषा सरल र प्रस्ट छ । नेपाली बालसाहित्य (किशोर साहित्य)का लागि यो किताब एउटा प्रयोगका रुपमा आएको छ ।
किशोरकिशोरीका लागि कृष्णदीप सिग्देलको यो पहिलो किताब हो । यसअघि उनका २ बालउपन्यास प्रकाशित भइसकेका छन् भने चित्रपुस्तकलगायतका ७५ भन्दा बढी किताबहरु उनले प्रकाशित गरिसकेका छन् । त्यस्तै युवापुस्ताका प्रखर र क्रियाशिल कलाकार सुमन महर्जनका सरस चित्रहरुले कथालाई अझ उजिल्याएका छन् ।
पुस्तक : सेकुवा
विधा : किशोर उपन्यास
लक्षित उमेर समूह : १२ देखि १५ वर्ष
लेखक : कृष्णदीप सिग्देल
चित्र : सुमन महर्जन
पृष्ठ संख्या : १७६ं
संस्करण : पहिलो (२०७७, कात्तिक)
प्रकाशक : साङ्ग्रिला बुक्स् (साङ्ग्रिला बुक्स् चिल्ड्रेन)
साङ्ग्रिला बुक्स् (साङ्ग्रिला बुक्स् चिल्ड्रेन) ले नवीन तथा प्रयोगधर्मी किताबको प्रकाशनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैको उदाहरण हो यो पुस्तक । बालबालिकाका लागि नवीन शैलिका तथा किशोरकिशोरीका लागि विविध विषयका पुस्तक प्रकाशने हेतु केही पुस्तकको प्रारुप तयार भइरहेको छ । छिट्टै नै सम्बद्ध पाठकहरुमाझ ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ ।
प्रदेश १ रबिन कटेल - January 10, 2021
धनकुटा । धनकुटा बजारमा आइतबार बिहान ट्याक्टरले किच्दा विद्यालय जाँदै गरेकी एक छात्राको मृत्यु भएको छ । धनकुटा–७ सिरवानीमा प्रदेश १–०२–००३ त ६१२ नम्वरको...
प्रदेश २ राकेश प्रसाद गुप्ता - January 10, 2021
सर्लाही । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समुहका कार्यकर्ता र नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ । दुई पक्षबीच...
सम्पादकीय : खोप कार्यक्रम सर्वसाधरणसम्म लक्षित गर
बिचार राजधानी समाचारदाता - January 10, 2021
विश्वका विकसित देशमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएसँगै नेपाल सरकारले पनि उक्त खोप नेपाल भित्र्याउन पहल गरिसकेको विषयले सर्वसाधरण सबैमा खुसी ल्याएको छ...
बिचार राजधानी समाचारदाता - January 14, 2021
राजधानी समाचारदाता - October 31, 2020
सावधान ! तपाईले लगाउने स्यानिटाइजर नै तपाईको लागि खतरा हुन सक्छ
राजधानी समाचारदाता - September 12, 2020
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि भरपर्दो उपाय बनेको छ स्यानिटाइजर । नेपाल सरकारले विभिन्न सन्देश मार्फत सावुन पानीले हात धुन र स्यानिटाइजर लगाउन...
प्रदेश अजय साह - September 10, 2020
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - September 10, 2020
सिन्धुपाल्चोक । जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाका लागि आजदेखि एस ओ एस बालग्राम काभ्रे पुगेका छन् । त्यहाँ उनीहरुको...
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - May 31, 2020
जनताले नगरेको गल्ती !
बिचार नगेन्द्रराज पौडेल - December 28, 2020
यतिबेला देश विषम परिस्थितिमा छ । जनतालाई जनार्दन भनिन्छ । तर, २०१७ सालदेखि जनताले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय पाइराखेका छन् । खासगरी राजनीतिक दलको...
चरिकोट अस्पताल गरीबका लागि बरदान साबित
प्रदेश दीपशंकर चौलागाई - March 21, 2020
दोलखा ८ चैत । स्किन ग्राफटिङ शल्यक्रिया गरि न्यायहेल्थ नेपाल प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालले एक महिलाको जिवन बचाउन सफल...
अलपत्र परियो भन्ने आवाज नै सुनेका छैनौं : प्रधानमन्त्री कार्यालय
Exclusive टेनिस रोका - May 24, 2020
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा श्रमिक, मजदुर तथा विद्यार्थीलगायत अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा बेवास्ता...
खोलाको जग्गा हाउजिङको नाम पास गरिदिने नापी कार्यालय प्रमुख सहित १७ जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको कर्मनासा खोला छेउछाउको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हाउजिङको नाममा पास गरिदिएको आरोपमा ललितपुरका तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख...
एम के माझी - January 10, 2021
एजेन्सी - January 13, 2021